Supermarket Manager at Grand Wynn Co., Ltd. | MyJobs
လုပ်ငန်းကဏ္ဍအားလုံးကြော်ငြာ ၊ မီဒီယာနှင့် ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊ ငါးလုပ်ငန်းနှင့် သစ်တောလုပ်ငန်းမော်တော်ယာဉ်နှင့် လေကြောင်းလုပ်ငန်းဘဏ် ၊ ငွေကြေးလုပ်ငန်း နှင့် အာမခံလုပ်ငန်းဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းပညာရေးလုပ်ငန်းစွမ်းအင်လုပ်ငန်းလုံခြုံရေးလုပ်ငန်းဖျော်ဖြေရေး၊ ပွဲအခမ်းအနားများနှင့် အားကစား လုပ်ငန်းအစိုးရကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းဟိုတယ်နှင့်ပတ်သက်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းနည်းပညာနှင့် ဆက်သွယ်‌ရေးလုပ်ငန်းဥပဒေဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် သိုလှောင်လုပ်ငန်းသတ္တုတူးဖော်ရေး ၊စွမ်းအင် နှင့် သတ္တု ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းအစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းအိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခန့်ထားရေး လုပ်ငန်းလက်လီးအရောင်း /အ၀ယ်လုပ်ငန်း၊ ဖက်ရှင် နှင့် လူသုံးကုန် စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းသင်္ဘောလိုင်းနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းခရီးသွားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း
အသစ်တိုးတက်လာသော MyJobs မှကြိုဆိုပါသည်။ မှတ်ပုံတင်၊ သင်၏ဝင်ငွေနှင့်အလုပ်ရှာပါ! သင်၏လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကိုဒီမှာပြန်လည်ရယူပါ။.
/ Supermarket Manager
Grand Wynn Co., Ltd.
We are currently seeking an experienced Supermarket Manager with minimum3to5years’ experience runningawide range supermarket. Incumbent exercise
အတွေ့အကြုံအဆင့်: Senior level
အတွေ့အကြုံကြာချိန်:3years
Planning, directing, coordinating and controlling the diverse day-to-day commissary department operation
Resolving employee and customer complaints
Acting as department manager (produce/meat/grocery)
Providing guidance and training to subordinates in the execution of the display program
Assuring item requisitions are made to maintain appropriate stock levels
Providing guidance and training to subordinates in the execution of the inventory requirements
Ensuring that all inventories are conducted timely and accurately as required
Supervise merchandise displays, work closely together with visual display staff to decide how items should be displayed, in order to maximize customer interest and product sales
Monitor customer service, ensure employees are providing excellent customer service in accordance to company policy
Maximize sales revenues, increase sales volumes through cross-selling, up-selling or promotion
Manage staff, manage employees and subordinates, working inateam or individually, to maximize their performance and contribution
Degree Holder and Diploma in sales & marketing
Minimum3to5years’ experience in supermarkets
A sound knowledge of supermarket best practice
Solid customer service attitude with excellent negotiation skills
Strong communication and team management skills
Analytical skills withaproblem-solving attitude
Very good commend of written and spoken English Language
Computer proficient in Microsoft Word, Excel, PowerPoint
Kaung Swan Htet Co., Ltd.
Sales & Marketing Manager - Modern Trade
Sale Supervisor/ leader ( female )
Naing Nine International Trading Co.,Ltd
Assistant Sales Manager - VSK International Co., Ltd.
Good Brothers' Co., Ltd